एक स्वीकारोक्ति : कहाँ–कहाँ घुसेको छ जातिवाद ?- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
मेरो दिमागमा कसरी घुस्यो जातिवाद ? कसले गर्दैछ यसलाई मलजल ? किन बेलाबेला फ्याट्ट जातिवादी उखान टुक्का र बचन मेरो मुखबाट निस्किन्छ ?
छोरीले राम्रो काम गरेको, बोल्ड बनेको, विद्रोही भएको, अभियन्ता बनेको टीभीमा मात्रै रुचाइन्छ, घरमा त हामी ज्ञानी र संस्कारी नै भएको जाति मान्ने हुन् ।
जेष्ठ १६, २०७७ सजना बराल
काठमाडौँ — यो मेरो आफ्नै गन्थन हो । घरको कुरा हो । भित्रको कुरा बाहिर ल्याएकोमा गाली खाऊँला । तर, ठीकै छ । अहिले रुकुम घटनाले धेरैको ‘रगत उमालिरहेका’ बेला मलाई भने यसबारे चुँइक्क बोल्न मन लागेको थिएन । आफ्नै घरमा जातीय छोइछिटो कायम छ, समाजलाई गाली गरेर बोल्नुको के अर्थ भन्ने लागिरहेको थियो । तर, स्वीकारोक्तिका लागि सही मौका हुन सक्छ भन्ने लाग्यो अनि लेख्दैछु ।
एकताका मैले आफ्नो लागि आफैंले खोजेको केटोबारे घरमा प्रस्ताव लगेकी थिएँ । ‘ऊ के काम गर्छ ? कहाँ बस्छ ? कति पढेको छ ? आनीबानी कस्ता छन् ?’ भन्नेखालका प्रश्नको अपेक्षा थिएन । नभन्दै आमाले सोध्नुभयो– ‘के थरी हो ?’
ऊ बाहुन नै भए पनि उपाध्यायभन्दा एक स्टेप तल्लो मानिने जैसी भएको चाल पाउनासाथ आमामात्र होइन सारा इस्टमित्रले ‘तोबा तोबा’ गरे । नाक पनि थेप्चे रहेछ भन्दै गललल हाँसे । मेरो रोजाइको खिल्ली उडाए । थप कुरै सोधेनन् ।
पछि अरु नै कारणले ऊसँगको सम्बन्ध तोडियो । तर, अझै पनि ऊ मलाई फेसबुक च्याटतिर सरापिरहन्छ– ‘यत्रो पत्रकार भएर तँ आफ्नै परिवारसँग जातका विरुद्ध लड्न सकिनस् ।’ एक हिसाबले ऊ सही छ । त्यसैले ऊसँग बोल्दा मलाई कताकता अप्ठ्यारो लागिरहन्छ । मैले ‘फलानो चिज पनि भयो, जात पनि मिलेन, बेकारमा घरमा लफडा हुन्छ,’ भन्दै मन मारेकी थिएँ । ‘जात पनि मिलेन’ भन्ने सोच आउनासाथ मैले बुझिहालेँ– ममा पनि जातीवादका अवषेश छन् ।
कहिलेकाहीँ सोच्छु– यदी मैले कुनै दिन, केही गरी गैरबाहुन र त्यसमा पनि आदिवासी, मधेसी वा दलित समुदायको केटो मनपराएर ऊसँगै बिहे गरेँ भने मेरो घरको माहोल कस्तो हुन्छ होला ? के, कत्रो रडाँको मच्चिएला ? कति रुवाबासी चल्ला ? रुकुम–जाजरकोटको जस्तो घृणीत र क्रुर हर्कत नभए पनि मलाई परिवारबाट बहिष्कार गरिन्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । त्यो क्षण मेरा लागि कति दुःखद हुँदो हो ।
मेरी फूपूलाई बुढा–हजुरबाको श्राद्धमा परपर गरिएझैं मलाई पनि घरको रीतिरिवाज र काजकृयामा सरिक गराइनेछैन भन्ने सम्झिँदा नमीठो लाग्छ । अझ, म र मेरो (कथित तल्लो जातको) लोग्नेले गरिखान सकेनौं भने त इस्टमित्र मात्रै होइन, मेरै भाइ र तिनका श्रीमतीहरूले समेत ‘खुच्चिङ, हामीले खोजेको केटो रोजेकी भए आज दरबारमा हुन्थिस्’ भन्दै काखी बजाउँदा हुन् । ओ हो, यो सब परिकल्पना गर्दा मात्रै पनि आङ सिरिङ्ङ हुन्छ ।
मेरी एकजना आफन्तले क्षत्री वर रोज्दा उहाँमाथि घरका पाका पुस्ताले मात्रै नभएर पढेलेखेका आफन्तले समेत ‘गु खाने बुद्धि भएकी’ भनेका थिए । मेरो हजुरबाले उहाँलाई हेर्दै थुइक्क थुक्नु भयो । सानो उमेरमै यस्ता घटनाको साक्षी बनेकाले होला, अहिले मलाई जतिसुकै पढेलेखेको, सचेत र इमानदार देखिए पनि गैरबाहुन केटोसँग हाई/हेलोभन्दा माथिको संवाद गर्न डर लाग्छ । नजाने गाउँको बाटो किन सोध्नु भनेर तर्किन्छु । र, म डरपोक हुनुमा मेरो मात्रै दोष छैन भन्दै आफूले आफैंलाई ‘जस्टिफाइ’ गर्न खोज्छु ।
स्कुल/कलेजताका मैले गुरुङ, तामाङ, राई थरका साथीसँग संगत गर्दा मेरा अभिभावकले गाली गरेको सम्झना ताजै छन् । हो, उनीहरूमध्ये कोही चुरोट र ड्रगको नसामा धुत थिए तर त्यसमा तिनको थरको के दोष ? बाहुन साथीले चुरोट तान्दैनन्, सुई हान्दैनन् भनेर मेरा परिवार र छिमेकी के साह्रो ढुक्क भएका ! ‘असल साथी रोज भन्नुको सट्टा ‘यी चुरेटे गुरुङ, तामाङसँग संगतै नगर, गरिस् भने झापु खान्छेस्’ भन्दै मलाई धम्की दिए । पछि–पछि त मंगोलियन चेहरा भएका साथीहरूलाई घर ल्याउनै धक लाग्न थाल्यो मलाई ।
यो सब सुन्दा मेरो परिवार अनपढ, अज्ञानी छ भन्ने लाग्ला । परिवारमा त्यस्ता पनि छन् कोही–कोही । तर, विद्यालय नगएका सदस्यसरह नै पढेकालेखेकाहरू पनि जातीवादी, परम्परावादी र संस्कारलाई कसैको नभएको इज्जतसँग जोड्नेहरू छन् । घोकन्ते विद्याले उहाँहरूको चेत खुलाउन सकेन भन्दै म घरायसी डिबेटका बेला सम्हालिन्छु । अहिलेका फेसबुक, युट्युबले पनि उहाँहरूको सोच बदल्न सघाएका छैनन् । मेरा बा–आमाले हेर्ने गरेका युट्युब भिडियोहरू ‘हेर्नुस्, यस्तो रहेछ नवराज र सुषमाको प्रेमलिलाको रहस्य’ टाइपका हुन्छन् (माफ गर्नुहोला, यो लेख्नुपर्‍यो) । यस्ता भिडियो बनाउनेहरू मेरा बा–आमाको उमेरका त पक्कै नहोलान् नि ! ती किन त्यस्ता भए ?
मेरा अभिभावक अशिक्षित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले छोइछिटो गर्नुलाई एकैछिन माफ गरिदिऊँ । तर, म पढेलेखेकी भनाउँदीमा पनि जातीवादी कलङ्क भित्रभित्रै लुकेर बसेको पाउँदा आफूलाई धिक्कार्छु । मैले के पढेँ ? के बुझेँ ? मभित्र त्यस्ता विचार कसरी छिरे ? यिनको मलजल कसले गर्‍यो ? तिनलाई निर्मुल पार्ने काम कसको थियो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नतिर लाग्दिनँ । बरु, साथीभाइलाई ‘छ्या, भैयाजस्तो देखियौ’ टाइपका प्रतिकृया दिन्छु । हजुरबाले ‘रसाइली के थरी हुन् ?’ भनेर सोध्दा ‘दमाइ/कामी हुन् क्यारे’ भनिदिन्छु । अनि रुकुम घटनाविरुद्ध कडा ट्वीट गर्छु ।
तपाईलाई भ्रम नपरोस्, म कट्टर जातीवादी होइन । मलाई जातीय छुवाछुत, उँच–निचसँग मतलब छैन । कसको थर के हो भन्ने कुराको पनि कहिल्यै पर्वाह भएन । तर, म जातीयताको घेरा नाघेर घरबाटै सुधारको पहल थाल्न सक्दिनँ । म निम्छरो छु । मेरो अवचेतनमा जातीय विभेद झल्काउने, हेपाहा शब्द, सोच, चुट्किला, उखान–टुक्काहरू अड्किएर बसेका छन् । बेलामौकामा ती फ्याट्ट निस्किहाल्छन् । सोच्छु– बरु एकैचोटि हुरुरु निस्किएर दिमाग सँधैका लागि सुग्घर भइदिए हुने । विडम्बना, जातीयताको सबालमा न मेरो दिमाग न यो समाज एकैचोटि सफा हुनेवाला छ । अझै कति वर्ष, कति दसक जातीवादको कसिङ्गर म र मेरो परिवार, मेरो समाज र मेरो देशमा यथावत रहने हो !
एउटा राम्रो कुरा, म सुध्रिन खोज्दैछु, सिक्न–बुझ्न चाहँदैछु । तर, मेरो परिवार र मेरो परिवेशलाई कसरी सुधार्ने होला ? उहाँहरूलाई कसले, कहिले सिकाइदेला ? आफू बाहुन हुनुमा, मल्ल हुनुमा गर्व गरेर बसिरहनु भएको छ, थप सिक्नु/बुझ्ने जरुरत देख्नुहुन्नँ । बरु मैले लामा, विक, चौधरी केटो मन पराउनुमा खोट देख्नुहुन्छ । मेरो भाइलाई जापानीज बुहारी ल्याउलास् भनेर थर्काउनु हुन्छ । संविधानका धारा, ऐन, कानुनको मलतब छैन । कसुर, सजायसँग डराउनु हुन्नँ । उस्तै परे कानुनलाई घरमै बोलाएर खिर–सेलरोटी, सर्वत ख्वाएर/पियाएर पठाउनु हुन्छ । यस्तै चल्दै आएको छ । म केही गर्न सक्दिनँ ।
मेरो निरिहतामा प्रश्न उठाउनु हुँदो हो, यो पनि ठीकै छ । तर, यति भन्छु– अर्ति–उपदेश बाँडेर दुनियाँलाई पलभरमै बदल्न सकिएला तर परिवारको सोच बदल्न मान्छेलाई गाह्रो पर्छ । म कोसँग भिड्ने ? मेरी बुढी हजुरआमासँग ? अझ, मजस्ती मरन्च्याँसे छोरीले सुधार र परिवर्तनका कुरा गरेको यो घरमा कसले सुन्ने, कसले पत्याउने ! मलाई हेपेर, हेला गरेर, भाइ र ममा भेदभाव गरेर मेरो कुरा नसुनिएका होइनन् । तर, हाम्रोजस्तो मध्यम वर्गीय उपाध्याय बाहुन परिवारमा छोरी भनेका छोरी नै हुन्छन् सँधै । छोरीले राम्रो काम गरेको, बोल्ड बनेको, विद्रोही भएको, अभियन्ता बनेको टीभीमा मात्रै रुचाइन्छ, घरमा त हामी ज्ञानी र संस्कारी नै भएको जाती मान्ने हुन् ।
खैर, रुकुम घटनाले मलाई स्तब्ध बनायो तर अनौठो लागेन । भन्ने नै हो भने यस्ता घटना एक न एक दिन हुनु नै थियो जस्तो लाग्छ । बाहिर–बाहिर परिवर्तनका कुरा गर्दैमा भित्रि समाज कहाँ बदलिन्छ ! समाजका चित्कार बेवास्ता गरिए ती यसरी नै विष्फोट भइदिन्छन् । मलाई अब डर लागिरहेको छ– ‘क्रान्ति सुरु भएको गाउँ’ मा त यस्तो अपराध हुन्छ भने ‘क्रान्ति पुग्दै नपुगेका ठाउँ’मा के होला ? केही गरी यो घटनाका दोषीलाई कारबाही भएन भने यस्ता ‘लिन्चिङ’का खबर यत्रतत्रबाट आउन सक्छन् । त्यो बेला के गर्ने ? कारबाही भयो नै भने पनि त्यसपछि के त ?
यो समाचार, यो घटनाबारे सुन्दै नसुनेकाहरू पनि छन् । तिनलाई जातिवादी उदण्डता कस्तो हुन्छ ? किन हुन्छ ? त्यसको परिणाम के हुन्छ ? अथवा जातीय छोइछिटो गर्नु, जातजातीलाई उँचो–निचो देखाउनु, हेपेर बोल्नु, खिल्ली उडाउनु गलत हो भनेर कसले, कसरी, कहिले, कुन माध्यमले सम्झाइदिने/बुझाइदिने ? अब पनि नबुझाए कहिले बुझाउने ?
मलाई यहाँ कुनै अर्ति बाँड्नु छैन । यो लेख लेख्नुका मेरा दुइटा कारण छन् । म चाहन्छु, मेरा भाइबाहिनीले ती युवा भएपछि आफूभित्र जातीवादका कत्लाकत्ली रहेछन् भन्ने चाल पाएर त्यसलाई पखाल्न मैलेझैं संघर्ष गर्नुनपरोस् । म चाहन्छु, मेरा बा–आमाले झैं मैले मेरा छोराछोरीलाई तिनले रोजेको पार्टनरको नाक थेप्चे रहेछ भनेर खिसि नउडाऊँ । म मेरो विचार सुग्घर बनाउन चाहन्छु अनि मेरो परिवार सुग्घर भएको देख्न चाहन्छु । यत्ति ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १३:५२
जेष्ठ १६, २०७७ अजित तिवारी
जनकपुर — भारतमा रहेका नेपालीहरु फर्किएसँगै प्रदेश–२ मा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या देशभरमै उच्च पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिडिया ब्रिफिङमा बिहीबार मात्रै प्रदेश–२ का ९३ जना थप संक्रमित पुष्टि भएको जनाएको छ । योसँगै प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४ सय १५ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार प्रदेश–२ को धनुषामा २९ जना, सप्तरीमा १४ जना, सर्लाहीमा ७ जना, सिरहामा ६ जना, रौतहटमा २० जना र महोत्तरीमा १७ जना थप संक्रमित भेटिएको हो । तर, प्रदेश–२ को समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बिहीबार ३ बजेर ३० मिनेटमा गरेको मिडिया ब्रिफिङमा प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४ सय मात्र रहेको दाबी गरेको छ । समाजिक विकास मन्त्रालयले भने बिहीबार प्रदेश–२ मा ७६ जना संक्रमित मात्र थपिएको दाबी गरेको छ ।
जनकपुरस्थित प्रदेश–२ को प्रहरी कार्यालयले भने २ सय ४९ जना सर्वसाधारण र १३ जना सुरक्षाकर्मी प्रदेश २ मा कोरोना भाइरस संक्रमित रहेको तथ्यांक राखेको छ । प्रहरीको यो तथ्यांकमा निको भएकाहरुको संख्या जोडिएको छैन । प्रदेश–२ मा हालसम्म ९८ जना निको भइसकेका छन् ।
प्रदेश–२ को समाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबारसम्म तयार पारेको तथ्यांकअनुसार सप्तरीमा २९ जना, सिरहामा १४ जना, धनुषामा ४१ जना, महोत्तरीमा २३ जना, सर्लाहीमा ४१ जना, रौतहटमा सबैभन्दा बढी १ सय ९ जना, बारामा ४९ जना र पर्सामा ९१ जना कोरोना भाइरस संक्रमित छन् । यस्तै, अन्य ठाउँ ठेगाना भएपनि प्रदेश–२ मा रहेका थप ३ जना पनि कोरोना संक्रमित रहेको समाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश–२ मा २ सय १२ जनाको आइसोलोसनमा उपचार भइरहेको छ ।
प्रदेश–२ मा बिहीबारसम्म ११ हजार जनाको स्वाब परीक्षणका लागि संकलन गरिएको छ । जसमध्ये १ हजार ६ सय २० जनाको नतिजा आउन बाँकी छ । स्वाब संकलन गरिएकामध्ये ८ हजार ९ सय ८० जनाको नतिजा नेगेटिभ आएको छ । ‘हाम्रो तथ्यांकअनुसार प्रदेश–२ मा कूल संक्रमितको संख्या हालसम्म ४ सय नै छ,’ समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले भने ।
प्रदेश–२ मा बिहीबारसम्म १५ हजार ४२ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । ५ हजार ५ सय २ जना होम क्वारेन्टाइनमा रहेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
लकडाउनयता भारतबाट १७ हजार ४ सय २१ जना मानिस प्रदेश–२ मा भित्रिएको प्रदेश–२ प्रहरी कार्यालयका इन्सपेक्टर तिलक सुनारले जानकारी दिए । उनले जेठ १ गतेयता प्रदेशका विभिन्न नाकाबाट मात्रै ८ हजार ६ सय ५ जना भित्रिएको बताए । बिहीबार मात्र २ हजार ९ सय ३५ जना भारतबाट प्रदेश–२ मा आएका हुन् । लकडाउनयता भने प्रदेश–२ को विभिन्न जिल्लाबाट भारत जानेको संख्या १ हजार ५ सय १९ मात्र छ ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिडिया ब्रिफिङमा प्रदेश–२ को संक्रमितको संख्या त्रृटिपूर्ण छ,’ समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले भने, ‘१५ जनाको थप संख्या मिस्टेक्ली आएको देखिन्छ । यसअघि पनि संख्या तलमाथि भएको थियो । हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी दिएर सच्याएका थियौं ।’
एकै गाउँका १८ संक्रमित
धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका १८ जनामा बिहीबार कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरु १८ वर्षदेखि ५७ वर्षसम्मका छन् । एकैगाउँका यी १८ जना भारतबाट फर्किएका हुन् ।
समाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार भारतबाट फर्किएका उनीहरुलाई लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाकै क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । संक्रमित पुष्टि भएपछि क्वारेन्टाइनलाई सिल गरेर गरिएको छ ।
उता, सिरहाका ३ गाउँपालिकामा बिहीबार थप ६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । बरियारपट्टी गाउँपालिकामा चारजना, लक्ष्मीपुर पतारी र औरही गाउँपालिकामा १/१ गरी ६ जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख कृष्णदेव यादवले जानकारी दिए । योसँगै जिल्लामा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या १४ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य प्रमुख यादवका अनुसार बिहीबार संक्रमण पुष्टि भएका बरियारपट्टी गाउँपालिकाका १८, १८, २५, ४० वर्षीय गरी चारजना, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका १८ वर्षीय पुरुष र औरही गाउँपालिकाका ३२ वर्षीय पुरुष गरी ६ जना छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १३:५१